Rosanes sy ny andiany "Bibidia Geometrika" | Famoronana an-tserasera
Ireo biby dia aingam-panahy be ho an'ny mpanakanto maro ary manodidina antsika dia misy ohatra maromaro amin'izy ireo. Biby dia an'ny bibilava miaraka amin'ny pensilihazo miloko, ny seramika ao Turowska endrika biby, mpanakanto norveziana ary ireo biby mahazatra ao amin'ny faritra misy anao na ny fampitambarana zavamaniry sy biby avy amin'i Ellen Jewet dia ny sasany amin'ireo fialamboly mahafinaritra amin'ny endrika sy teknika samihafa hitondrana antsika amin'ny herin'ny natiora amin'ny endriny mazava kokoa.
Ity fusion ity dia hita ao amin'ny sary sarotin'i Kerby Rosanes izay mamerina antsika ny masontsika amin'ireo biby voasintona kanto ireo hanambatra azy ireo ho endrika geometrika amin'ny fomba famoronana sy tany am-boalohany. Miaraka amin'i Rosanes isika dia mifampiraharaha amin'ny mpanakanto iray izay manana teknika tena tsara araka ny azonao an-tsaina ao amin'ny sary tsirairay avy.
Rosanes dia mpanakanto Filipiana ary ankoatry ny maha-izy azy fantatra amin'ny internet noho ny andiany tantara an-tsarimihetsika dia niverina niaraka tamin'ny andiany mitondra ny lohateny hoe "Geometric Beasts" na "Geometric Beasts."
Ity fanoharana ity mampiasa pensilihazo mahazatra mba hamoronana ny asany, tamin'ity indray mitoraka ity dia mampifangaro ireo bibidia amin'ireo endrika geometrika manokana izay manome vokatra tena mahomby mba hamela anay ho gaga amin'ny originality ny asany. Asa tena tsara izay azontsika atrehana amin'ireo biby toa manimba ilay rafitra geometrika manakana azy ireo na mitsambikina na mampiasa hetsika voajanahary indrindra amin'ireo soavaly, alika na trozona ireo.
Anananao ny azy Facebook, Instagram y Malagasy afaka manaraka ny asany sy mahita andian-tetikasa hafa Mba hahagaga ny mpitia sary indray ary manana tombana manokana ho an'ny fanoharana.
Azo antoka fa tsy hisy izany na ny voalohany na ny farany mahita an'i Rosanes manaitra anay amin'ny asany kanto avo lenta izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sarin'ny biby namboarina niaraka tamin'ny géometrika madio
Sandra GL dia hoy izy:
Arantxa García Fitiavana toa ny flamenco-nao?
Valio amin'i Sandra GL
Arantxa García Fitiavana dia hoy izy:
Hahahaha tena vorontsiloza! Ity iray ity dia currado be lavitra hahaha
Valiny tamin'i Arantxa García Enamorado
Arantxa García raiki-pitia aho fa toa zavatra hahaha
Arantxa García Amin'ny fitiavana? Mampiala ny nolazaiko aho hahaha
Hahahahahahahahahaha hey uapa tsy dia ratsy loatra chsss
Arantxa García am-pitiavana dia nolazaina hatrany fa fankahalana ny fampitahana ???
lolplay tsy ambara dia hoy izy:
Ity kaway ity ary izaho dia nanao anao izay nanome ahy tsara fa ny saina tsara
Valiny amin'ny lolplay tsy ambara
Aoife dia hoy izy:
Azoko atao ve ny mangataka alalana haka ny iray amin'ireo sary ireo ho toy ny tatoazy?
Mamaly an'i Aoife